Miseensi Paarlaamaa Daa’ima Harma Hootu Fudhatanii Gumii Seenan Dhooggaman
Paarlaamaa Keeniyaatti bakka buutuu kutaa bulchiinsa Kuwaalee jedhamtuu ka tahan harra daa’ima fudhatanii yoo paarlaamaa seenuuf jedhan dhoggamanii jiru.
Zuleykaa hasan bakka buutuun dubartoota Kuwaalee, daa’ima ji’a shanii ka qaban yoo tahan, harra maree idilee paarlaamaa biyyattii daa’ima isaanii fudhatanii seenuuf utuu jedhaniiti seensarratti ka dhowwaman.
Mss. Zuleykaan ta’ee kana booda. Wanni narra dhaqqabe, mirga dubartiin argachuu malte ka faallessuu jechaan dubbattan.
"Harra dhimma ariifachiisaa qaba ture; yoo dhimmi si muddu sitti dhufu ammoo waan gootu hin qabdu. Kanaaf bakka mucaa koo kaawu waan hin qabneef ykn hojii hafuu ykn fidee dhufuutu narra ture. Kanaaf daa’ima kiyya fidee dhufuuf murteesse. Kanas kanan murteesseef namoota kiwaalee ka bakka na buufataniif sagalee tahuufi. Daa’ima qabaachuun adabbii ta’uu hin qabu; kun waan uumama jireenya keessaati."
Gocha kana dubartootni Miseensa paarlaamaa Keeniyaa ta’an kaanis mormanii jiru. Yoo mormii isaanii ibsatanis, qaama seera baasee mirga saba biyyattii eegsisu keessatti mirgi dubartii hojii hojjettu tokko daa’ima sababa harma hoosisteef hagas yoo dhiibame waajjiraalee kaanitti maal akka tahuu malu yaaduun waan yaaddessaadhaa jedhan.
Miseensonni paarlaamaa Keeniyaa Adoolessa bara 2013 dubartoota daa’ima qaban ka miseensa paarlaamaa tahaniif bakka daa’ima itti hoosisan fi kunuunfatan yaa qopheessuuf koomishinii paarlaamaa biyyattiitti ajaja dabrsus haga yoonaa murteen kun hojiitti hin hiikamnee jechuunis komii qaban dubbatanii jiru, dubartoonni miseensa paarlamaa Keeniyaa.
Keeniyaatti seerri haadholiin daa’ima hoosifatan fuudhanii gumii akka seenan dhorku hin jiru.